Ukuze abe indlovukazi, akusho ukuthi ukufuna ayoshada nendoda kusuka asebukhosini noma ukufuna ubudlelwano abameleli bakhe nozalo kanye nohlu lozalo igazi okwesibhakabhaka. Namuhla, kuba lula kakhulu ukwenza - nje aphonse ethambile emahlombe zesifazane langa elingenamikhono okugcwele isimangaliso kuzokwenzeka - kuyoba isimo ekahle, le gleam emehlweni akhe, futhi kwesilevu sakhe is ngokuziqhenya waphakamisa!
Empeleni, namuhla elingenamikhono - akusiwona kuphela isici wezigqoko - isitayela sayo, isimo, kuba ajabule, okuyinto nakanjani sibe nawe okwesikhathi zonyaka ezimbalwa, kuze kube manje ngenxa yamakhaza ebusika wena kuzofihlwa elingenamikhono zakho ozithandayo. Labo Usukuthengile isimangaliso uboya siyabahalalisela, futhi kulabo nje ufuna "yabo" noboya coat e Moscow, sizilungisile eziningi izincomo kanye neziphakamiso.
amajazi eziphezulu eMoscow zidayiswa ezitolo engcono
Kuyinto imfihlo ukuthi noboya yemvelo elingenamikhono - lokhu akukona lezimpahla ukuthi kungenziwa abazithenge emakethe evamile. Uma unesithakazelo uyisibonelo upscale fur zemvelo, izinga okusezingeni ithungwe egqoke ke kungcono ukubheka ezitolo ukuthi banezeluleko efana umthengi. Khona-ke wena ubukhulu ngokunembile pick up, futhi izinhlobo eziningi ezintsha uyoboniswa, futhi isaphulelo uzokwazi ukwenza. Kulokhu, uzobe siqiniseka ngokugcwele ukuthi yokufuna noboya umcebo izinga zemvelo ngenxa umkhiqizi noboya e Moscow, oqinisekisa izinga okusezingeni eliphezulu imikhiqizo yayo - iwumkhiqizo esiyingqayizivele. Elinegazi okuningi, ngakho kudingeka uqaphe ikakhulukazi kule ndaba ebucayi.
Siqala yezigaba kugasela Amawebhusayithi
Kuleli zwe lanamuhla-computer e iningi ezitolo ezinikeza imikhiqizo ephuma noboya, has nekhasi layo ku-intanethi, noma ngisho indawo lapho noma imuphi umsebenzisi nazane lahlukene izitolo (noma lwezitolo), ukufunda ulwazi oluningi ezithakazelisayo, bheka amakhophi amadokhumende ukuqinisekisa okwakhe we Izifutho ezihlongozwayo. Ngakho uma unentshisekelo, isibonelo, kusukela raccoon noboya e Moscow, ungavele udale umbuzo ezifanayo injini isiphequluli sakho search futhi uthole amakheli ezitolo ezinikeza-product efanayo nalena.
Thina asesabi ukuchitha isikhathi ukusesha
Uma uke ayitholakalanga impendulo Inthanethi umbuzo lapho ukuthenga ijazi noboya e Moscow, impendulo izinkundla benganikezwa impendulo enembile, kufanele uqale ukuba khona kuyo yonke izitolo noboya emzini. Coat angabhekwa utshalomali ngokwanele sina. Ngakho shesha ngokukhetha akwenza, futhi ngokuqinisekile ayizange zinkulu. Thatha izinsuku yezitolo ambalwa. Funda ngokucophelela uhla umkhiqizo futhi ngomoya ophansi amabombo esitolo elandelayo. Ngokushesha uzoba wazi kahle hle ukuthi yiziphi imodeli yakho ikufanele wena, futhi lapho ebona ijazi efanelekayo amanani ezingabizi kakhulu. Kungcono ukuqala ngeziqhathaniso boutiques kanye ezidayiswa edolobheni laseMoscow ngokuthi "Snow Queen", "Aleph", "World of Isikhumba futhi Fur", "noboya Russian" nokunye okunjalo, bese kudingeke ukuba uvakashele ezitolo kancane.
Kodwa ukuze siqale - khetha imodeli
Uma ungafuni remeasure lonke uhla ezitolo evumelana nawe ngobukhulu, kubalulekile ukunquma ukuthi iyiphi imodeli unentshisekelo, khona-ke kuyoba lula kakhulu ukuze uphendule lo mbuzo lapho ukuthenga ijazi noboya eMoscow. Izibuyekezo abathengi abaningi bathi izitayela kakhulu bestselling yilezi:
- avtoledi (noma ibhantshi) - ijazi iDemo ngamancozuncozu, okuyinto enhle for ladies, kokuba imoto yakho siqu;
- klassika- lokhu oyisibonelo, ayikho ngaphansi fashion Amathrendi, ngemva kweminyaka eyishumi, kuyoba nje njengoba efanele;
- Cleopatra - elingenamikhono trapezoid ukuma ilungele umama omude ukwenzela ukungena okuncane kakhulu;
- insimbi - ngezansi amajazi kancane lwavutha. Ubukeka emnene kakhulu futhi njengabesifazane;
- butterfly - kuba imodeli dlala ukuthi ayisekho ukuba asivikele yamakhaza, futhi ukwakha ocebile, ephezulu isithombe womnikazi wayo.
Lezi imfashini noboya-Poperechka
Amabanga wentengo semphahla ezifana noboya amajazi, ingase ibe khona ehlukile ngokuphelele. Ungabona kule boutiques futhi intengo lapho ingxenye yesigidi - hhayi umkhawulo, futhi intengo Ngokwesilinganiso, kodwa uma - kungcono kakhulu, kuyafaneleka ukubuza umbuzo lapho ukuthenga ijazi noboya ephansi. Moscow amumethe izitolo fur izimpahla, futhi kuzo nakanjani athenjiswe "isabelomali" noboya-Poperechka. amashidi yabo Sew elincane isikhumba athungwe ahlanganiswa ukuze sele ngaphandle ebonakalayo. Bakha futhi enjalo noboya strip. Lokhu elingenamikhono kuyoba ishibhile kuka izinguqulo zakudala, lapho iyunifomu noboya Indwangu. Noma kunjalo, manje esiqongweni ukuthandwa kwakhe.
Ngaphambi kokuba uphendule lombuzo umbuzo lapho ukuthenga ijazi noboya eMoscow, ukubuyekezwa kwangempela batusa abathengi uzame ukuthola imikhiqizo noboya phesheya. Imigomo ezifana visa ngaphansi yezitolo - ke kuyinto ejwayelekile. Futhi choice fur amajazi kukhona umxhwele ngempela. Kodwa kukhona kule nguqulo kanye minuses. Abaningi amamodeli okuthandayo, izobiza imali efanele imali. Enhloko-dolobha empeleni ukuthola ijazi ishibhile uma uthatha, isibonelo, amapulazi esitolo noboya "Melkovskoe" noma ifektri Fur "MEHAEL". Njengoba imikhiqizo eyenziwe noboya, okuyinto umphumela kukhiqizwe ibhizinisi efanayo, futhi amanani aphansi kakhulu, ngoba ungafaki eziningi ukuhweba eziseceleni. Ngakho, uma ungakwazi ukuthenga ijazi noboya kamakhi eMoscow (kuleli banga ngeke eliphansi in izinga nobuhle izitolo abaningi bezinye izizwe), futhi asikho isidingo ukuchitha imali yokuhamba.
abakhiqizi owaziwa fur amajazi Pyatigorsk
Pyatigorsk imboni imikhiqizo lokuthunga noboya abhekwa phakathi best ezweni lethu. basebenza ikakhulu ne abangenisa engcono fur zemvelo, kangangokuthi ibhantshi ngamunye unikeza enhle kakhulu futhi aqine.
High Pyatigorsk amajazi eMoscow zingatholakala ezitolo EL-Ezeri. Amanani lapha alunge kakhulu, ngoba ezingeni ifektri, okungukuthi, ngaphandle kwendibilishi. Lapha ungakwazi ukuthenga imikhiqizo noboya kokubili lwezeMpilo Usizo.
Futhi yini okufanele uyenze intombazane enhle nge sibalo okumnandi curvy
Ukuphequlula izitolo lwemibhalo kungase kunikeze umuzwa wokuthi thunga kuphela ubude, nenekazi emide emincane, kwemigomo okuyinto asondela kakhudlwana embhalweni omazisayo 90-60-90. Futhi zimelelani amantombazane plus osayizi? Ingabe bayazisola ukulahla unaphakade noboya amaphupho amahle?
Impendulo - akekho! Namuhla, kumanethiwekhi athuthukile obuyimvukumvuku, ezifana uboya ifektri "Marina Furs", ungathola ingubo enkulu. E-Moscow, ungakwazi futhi oda ngabanye evumelanisa amajazi. Uma noma yini efanelekayo kusukela imikhiqizo siphelile, ungazange wacosha yena. isevisi okunjalo, isibonelo, kule studio Olede esitolo Olesi Ulyanovoy noma gumbi studio BELLISIMA. Ngo nje ababili noma abathathu amasonto uzoba umnikazi wesikhwama wajabula kakhulu brand new, kungakuhle kakhulu ehlezi emahlombe isembatho sakho. Akukhona eside kakhulu, ngoba abantu besifazane abaningi ukuthatha izinyanga kusesho fur esitolo.
Fox noboya - mkhuba zakamuva catwalks. lapho ukubheka ijazi noboya
Fox noboya uthambile kakhulu, kumnandi touch, imikhiqizo emihle ke sibheke izintokazi babo bonke ubudala. Futhi lapho abaklami emhlabeni babike ukuthi baye baba umkhuba futhi imfashini, abaningi baye baqala ukubheka noboya impungushe eMoscow. Iningi ezitolo enhlokodolobha sika, ezidayiswa, ungabona amajazi zibomvu amahle (noma edwetshwe kodwa impungushe), ngakho-ke nje kufanele akhethe ofanele kakhulu isitayela futhi intengo imodeli. ukukhetha Omkhulu fur amajazi impungushe noboya kungabonwa ezitolo nomkhiqizi kubhaliswe "Shubkin endlini."
Chernoburoy noboya impungushe - ngokuvamisile ngesihloko ahlukene yengxoxo. Nalapha futhi, yena ungakwesokunene esiqongweni kwayo, manje yilezozintombi abaningi baphupha ijazi yalesi material. umbala Noble futhi umusa, isisa noboya lendwangu ngokumthanda Awesome - yilokho ijazi impungushe. Ukuthengwa impungushe noboya amajazi eMoscow kungenzeka e boutiques amanethiwekhi kakhulu ukuqinisekisa ukuthi iphothifoliyo ayinaye imikhiqizo enjalo, umane hlola ngokucophelela zincwadi zabo, engatholwa ngisho kwi-inthanethi.
Funda indlela ukukhetha elingenamikhono kwesokudla
Manje ngoba wathola impendulo yombuzo lapho ukuthenga ijazi noboya e Moscow, izibuyekezo mayelana uhla engcono wafunda. Kufanele futhi ufunde imithetho embalwa futhi kukhethwa izimfihlo ukuthi ngeke akuvumele uba omunye kulabo abazizwa potrebitelnits bekhohliswa.
Empeleni, namuhla kulula kakhulu ukwenza iphutha bese ukuthenga umkhiqizo yekhwalithi ephansi, ngoba abakhiqizi Iye yafunda kuphela ukupenda noboya, kodwa benza ukuze umthengi ongenalwazi bayothenga ijazi noboya, isibonelo, unogwaja, nakuba ilebula batawubhala ukuthi mink. Ukungabi kolwazi - okungukuthi, iyini inkinga eyinhloko kulesi simo.
Eminye imithetho ukukhumbula lapho uthenga ijazi noboya
- Wobunye umbala: uma uthenga ijazi noboya kusuka ukudaya obuyimvukumvuku, qiniseka ahlole ngokucophelela. Hlola ukuthi umbala yonke indawo elihlale efanayo. Kubi izinga umbala - lokhu akuyona into okuyiwona sikhokhe imali.
- Azikho iminonjana upende: ukuletha iduku ezimhlophe bese uslayida yonkana kobuso noboya. Kukhona iminonjana upende - ucelwa ukuletha imodeli ezahlukene, futhi ungalaleli ukukhuluma mayelana nabathengisi ukuthi unayo upende esomile kusasa, kungcono nje imodeli entsha kakhulu.
- bheka "ngaphakathi": abakhiqizi abaningi self-ukuhlonipha umphetho ulwelwesi akuyona sutured nhlobo noma sutured ukuba 'Intambo bukhoma ", okungukuthi, uma kudingeka, i-otporot ulwelwesi bese nibheka elingenamikhono kusukela" ngaphakathi. " Ngakho uma ubona umkhiqizo izinga, bese kusuka kulo sidalwe noboya - okuqinile, noma ithungwe kahle kakhulu izingcezu ezincane.
- Kungcono makudle zabuna, uma ungakwazi ukuthenga yena ijazi elisha yonke isizini, kubalulekile ukuba makudle amamodeli classical kanye nemibala zasebukhosini. Phela, imfashini - lady ezinomoya ngonyaka ozayo, isembatho sakho sokuqala ungakhululeka kanjani ngokuphelele ayibalulekile, futhi bachithe imali kwi-into nje akafuni ukugqoka.
- Cha villi falling: ukusebenzisa isandla sakho phezu elingenamikhono ebusweni, cindezela ku-isibhakela futhi uphumule isandla sakho - akukho fluff akufanele uhlale uma ijazi noboya "ebesengenile", sicela ulethe umfuziselo ezahlukene. Futhi, noboya akufanele ulahlekelwa ukubonakala zlib, kuhlole ngokucophelela.
Ungesabi ukukhetha isikhathi eside, izikhathi ezimbalwa ulinganisa noboya amajazi. Lena utshalomali sina futhi ukhululekile futhi ukuqiniseka ukuthi ngenza isinqumo esihle. Futhi cela mayelana ukubuya izimpahla uma kwenzeka ukuthi uma elingenamikhono okuthile unganelisekile.
Wedding izingubo ngesitayela Antique
Thenga izingubo ku-intanethi: manje kulula!
Kuyini amanzi uya ezokuvakasha. Eziphuthumayo emkhankasweni amanzi
Ukuhambisa phezulu e Dubai: iphrojekthi wokuvelela kunazo yesimanjemanje